Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243315 times)
« Reply #360 on: July 21, 2011, 11:20:50 AM »
" ရိုက် တော့ ရိုက် ချင် သား "
" ဘယ်လိုလဲ... ရှင့် ယောင်္ကျား ရှင့်ကို မရိုက်တော့ဘူး မဟုတ်လား..
ဟိုတစ်ခါတုန်းက တရားသူကြီးက သူ့ ကို ဒဏ်ငွေ ၅၀ ရိုက်လိုက်
တယ် မဟုတ်လား.. "
" ဟုတ်တယ်.. အဲ့ဒီထဲက လက်ဖျားနဲ့ တောင် မတို့ တော့ဘူး..ဒါပေမဲ့
ထူုးဆန်းတဲ့ အကျင့် တစ်ခု ပေါ်လာတယ်. အလုပ်က ပြန်လာတဲ့အခါ
ကျမကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်တယ်..ပြီးတော့ စုဘူးထဲကို ငွေ ၅၀
« Reply #361 on: July 21, 2011, 03:05:53 PM »
" လူ က လေး ရယ် ငို "
ငယ်ရွယ်သည့် ကလေးအမေ နှစ်ယောက် မိမိတို့ ၏ ကလေးအကြောင်း ပြောနေကြသည် ။
" ကျမ သားလေးဟာ ကျမကို ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခမပေးဘူး ..သူ ငိုတယ် ဆိုတာနဲ့" လူက
လေးရယ်ငို....ခိုဖမ်းလို့ ပေး " ဆိုတဲ့ ကလေး ချော့ သီချင်းကို ဆိုလိုက်တာပဲ.. "
နောက်တစ်ယောက် ကလည်း သက်ပြင်းချပြီး ပြန်ပြောသည် ။
" ကျမလည်း အရင်တုန်းက အဲ့ဒိအတိုင်း ဆိုပြီး ချော့သိပ်တာပဲ... ဒါပေမဲ့.. အိမ်နီးချင်းတွေက
ကလေး ငိုတာ ငိုပါစေ လို့ဝိုင်းပြောကြတယ်..."
« Reply #362 on: July 21, 2011, 03:14:01 PM »
" ဘယ် သူ လဲ "
အိမ်ခန်းထဲတွင် တယ်လီဖုန်း မည်လာသည် ။ ယောင်္ကျားက ဖုန်းကို
" မောင်ရေ....ခင်တို့ ဆီမှာ သားယောင်္ကျားလေး မွေးတယ်တော့.. "
" ဟေ...ဟုတ်လား.. ၀မ်းသာလိုက်တာကွာ.. ဒါနဲ့အခု စကားပြောနေ
တာ ဘယ်သူလဲ ဟင်.. "
" နား ထောင် ချင် လို့ပါ "
လူခေါ်ခေါင်းလောင်း မည်လာသည် ။ သွားဆရာဝန်က တံခါးကို ဖွင့်ပေး
လိုက်သည် ။ တံခါးရှေ့ တွင် ချာတိတ်တစ်သိုက် ရပ်နေသည်ကို တွေ့ ရ
သည် ။ ၄င်းတို့ အထဲက တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" ကျနော်.. သွားနှုတ်မလို့လာတာပါ. "
" မင်း သူငယ်ချင်းတွေ ကကော.. "
" သူတို့ က ကျနော် ဘယ်လို အော်မလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့လိုက်လာကြတာ "
« Reply #363 on: July 21, 2011, 03:32:16 PM »
" သောက် ရင် မ လဲ နဲ့"
ရုံးဝန်ထမ်း တစ်ဦးသည် မျက်နှာတွင် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် တစ်ခုခုဖြင့်
အမြဲတမ်း ရုံးသို့ရောက်လာလေ့ ရှိသည် ။ တစ်နေ့ တွင် လုပ်ဖော်
ကိုင်ဖက် တစ်ဦးက ၄င်းအနီး ကပ်လာကာ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်း
" ဒီလိုဗျာ.. ခုတလော ကျနော် နေ့ တိုင်းလိုလို အရက်သောက်ဖြစ်တယ်
သောက်ရမလား ဆိုပြီး မိန်းမက ကျနော်ကို ဆော်ပလော် တီးတယ် "
" ကျနော်လည်း နေ့ တိုင်း အရက်သောက်တဲ့လူပဲ..ဒါပေမဲ့ ကျနော့်အရက်
သောက်တာ ကျနော့်မိန်းမ ဘယ်တော့မှ မသိဘူး..၊ ဟော့ဒီမှာ ကျနော်
သုံးတဲ့ အနံ့ ပျောက် ဆေးပြား..၊ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာအနံ့ မှ
မရတော့ဘူး...ရော့.. ယူသွားပြီး သုံးကြည့်စမ်းပါ.. "
နောက်တနေ့ တွင် ၀န်ထမ်းသည် မျက်နှာတွင် ဒဏ်ရာဖြင့် ရုံးသို့ရောက်
လာပြန်သည် ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က မေးသည် ။
" ဟေ့လူ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.. ကျနော် ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးပြားကို မငုံဘူးလား "
" ငုံပါတယ်...ဒါပေမဲ့ မိန်းမ သိသွားတယ်.. "
" ဘယ်လိုလုပ် သိသွားတာလဲ ဗျ.. "
" ကျနော် လဲကျသွားလို့"
« Reply #364 on: July 21, 2011, 03:43:29 PM »
" က လေး တို့အ ဖေ "
မိန်းမကို လင်ငယ်နှင့် တွေ့ သဖြင့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူသည် ခါးထဲမှ
ခြောက်လုံးပြူးကို ထုတ်ကာ လင်ငယ်ကို ချိန်သည် ။ မိန်းမဖြစ်သူ
သည် ယောင်္ကျား နှစ်ယောက် အကြား ရပ်လိုက်သည် ။ ယောင်္ကျား
ကို အောက်ပါအတိုင်း ငိုယိုပြီး တောင်းပန်သည် ။
" ဂျွန်..ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့ အဖေကို ရှင် တကယ် သတ်တော့မှာလား "
" သ နား ပါ "
" သမီး .. သမီးယူမဲ့ လူငယ်က မိဘမဲ့သား..ပြီးတော့ သူ့ ခြေထောက်ကလည်း
ထော့နဲ့ထော့နဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်..၊ သူ့ ကို လက်မထပ်ပါနဲ့သမီးရယ် "
" သမီး ရုပ်ချောတဲ့ ယောင်္ကျားကို မယူချင်ဘူး "
" အဖေ ပြောတာက သူ့ ကို သနားဖို့ပြောတာပါကွယ်.. သူ့ ခမျာ နဂိုထဲက
ဘ၀ကံ မကောင်းရတဲ့ အထဲ.. "
« Reply #365 on: July 22, 2011, 09:47:23 AM »
" နား လည် လား "
ရုံး အရာရှီက မိမိ၏ လက်အောက် ၀န်ထမ်းကို ပြောသည် ။
" အကြီးအကဲ ဆိုတာ လက်အောက်က လူတွေ နားလည်အောင်
ပြောတတ် , ဆိုတတ် ရတယ်.. အဲ..မပြောတတ် မဆိုတတ်ဘူး
ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလူဟာ အကြီးအကဲ မဟုတ်ဘူး.. လူဖျင်းလူညံ့
" ဟင့် အင်း.. "
" ယော င်္ကျား တွေ အ များ ကြီး "
" ဟေ့..မိန်းမ မင်း ပြင်ဆင်ထားတာ ကြော့လို့ ပါလား.. "
" ရှင် ကြိုက်အောင် ပြင်ဆင်ရတာပေ့ါ တော်.. "
" ဒါပေမဲ့အခု မင်းက ရုံး သွားမှာ မဟုတ်လား.. ဘာဖြစ်လို့ 
အလှဆုံးတွေပဲ ရွေး ၀တ်ရတာလဲ ကွ. "
" ဘာလဲ...ရုံးမှာ ဒီပြင် ယောင်္ကျားတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ရှင်..
ထင်လို့ လား.... "
« Reply #366 on: July 22, 2011, 10:23:47 AM »
" အ သေး အ မွှား "
ခွဲစိတ်ခန်းရှေ့ တွင် လူနာတစ်ယောက်နှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်
နှစ်ယောက် အငြင်းပွားနေကြသည် ။
" သူ့အခြေအနေက ဘာမှ အားရစရာ မရှိဘူး.. ကျနော့် အထင်တော့
သူ့ ရဲ့ဘယ်ဘက် ခြေထောက် ဖြတ်ပစ်ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်.. "
" ကျနော့် အမြင်တော့ နှစ်ဖက် စလုံးကို ဖြတ်ရမယ်.. "
" တစ်ဖက်တည်း ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျ.. "
" မဟုတ်ဘူး.. နှစ်ဖက်စလုံး.. "
မိမိ စိတ်ကို ထိန်းကာ ပထမ ဆရာဝန်က ပြန်ပြောသည် ။
" ကောင်းပြီ... ခင်ဗျား ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်စေဗျာ..ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ 
ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် လူကြားလို့ မှ မကောင်းဘူး "
« Reply #367 on: July 22, 2011, 10:30:43 AM »
" ဟုတ် မှ ဟုတ် ရဲ့လား "
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ မှုကို မကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည့် လူကြီးတစ်ဦး
ကွယ်လွန်ရာ ၄င်း ၏ အသုဘ အခမ်းအနားတွင် ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီးက ကွယ်
လွန်သူ၏ ဂုဏ်ပုဒ်များ အကြောင်းကို ပြောသည် ။ ကွယ်လွန်သူသည် ခင်ပွန်း
ကောင်းသာမက ဖခင်ကောင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ၄င်းက ချီးမွှမ်းသည် ။
ကွယ်လွန်သူ၏ ဇနီးက မိမိ၏ သမီးကို နားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောသည် ။
" သမီး.. သွားကြည့်စမ်း.. အခေါင်းထဲမှာ နင့် အဖေမှ ဟုတ်ရဲ့ လားလို့"
« Reply #368 on: July 22, 2011, 10:38:27 AM »
" ပျော် ရွှင် ချမ်း မြေ့တဲ့ နည်း "
" ဟေ့...မေရီ . မင်းကတော့ ဘ၀ရဲ့သာယာချမ်းမြေ့ မှုကို ရနေပြီလို့ကြားရတယ်
ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရတာလဲဆိုတာြေုပာပြစမ်းပါဦး "
" လွယ်လွယ်လေးပဲ. သူဌေးတစ်ယာက်နဲ့မိတ်ဆွေ ဖြစ်တယ် သူ့ ဆီမှာ ပိုက်ဆံရှိတယ်
အိုင့်ဆီမှာ အတွေ့ အကြုံ ရှိတယ်.. "
" အခုတော့ကော "
" အခု သူ့ ဆီမှာ အတွေ့ အကြုံ ရှိတယ်... အိုင့်ဆီမှာ ပိုက်ဆံ ရှိတယ်လေ.. "
« Reply #369 on: July 22, 2011, 10:55:30 AM »
" အ လေး ပြု "
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဖြစ်သည် ။ ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်က တပ်သားသစ်ကို
" ဟေ့... စစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်ကို တွေ့ ရင် မင်း ဘယ်လို အလေးပြုရမလဲ
ဆိုတာ သိရဲ့ လား.. "
" သိပါတယ်.. ဂျာမန် စစ်ဗိုလ်ဆိုရင် လက်တစ်ဖက် မြှောက်မယ်... ရုရှားစစ်ဗိုလ်
ဆိုရင်တော့ လက်နှစ်ဖက် မြှောက်ရပါမယ်.. "
" သ တင်း တို "
" သူဌေးကြီး ဦးထိန်ဝင်းတွင် ကလေးသုံးယောက် တစ်ပြိုင်တည်း မွေးသည် ။ မိခင်
အားလုံး နေကောင်းကြသည် ။ "